Fanoherana · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Septambra, 2010
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Septambra, 2010
Amerika Avaratra 14 Septambra 2010
Amerika Latina 08 Septambra 2010
Maty noho ny tsy fahafahany miaina intsony tany amin'ny hopitaly miaramila ny alin'ny Alatsinainy i Franklin Brito Tantsaha Venezoeliana raha nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina izy tamin'ny Jolay 2009 . Niaina tanaty fitokonana tsy mihinan-kanina maro i Brito nanohitra ny fakan'ny fanjakana ny taniny. Manao hetsika noho ity filazana mikasika ny nahafatesany ity ireo Venezoeliana amin'ny alalan'ny Twitter sy ireo bilaogy .
Mozambika: Herisetra, hatezerana any Maputo
Afrika Mainty 06 Septambra 2010
Raha tonga ny alina amin'ny andro faharoan'ny korontana feno herisetra, mbola mitoetra ny fisalasalàna any Maputo. Mbola miketrika mafy mandevina sy mandalina ireo fototr'ireo korontana ireo mpitoraka blaogy, izay natosiky ny fiakaran'ny vidim-piainana. Zavatra iray no azo antoka: niteraka fanontaniana lalina momba ny toerana misy ny firenena ara-politika, sosialy ary toe-karena izany.
Mozambika: Fanairana fa misy rotaka ao Maputo
Mozambika 02 Septambra 2010
Niely ny resaka an-toho-tsofina, SMS eny fa amin'ny alalan'ny Twitter aza omaly fa hisy ny fitokonana faobe. Ny antony: Ny vidim-piainana “tsy ara-drariny” – miakatra ny vidin'ny mofo, ny rano ary ny jiro. Mety hahatsiaro ny mpamaky fa niteraka rotaka sy fanoherana, tamin'ny volana Febroary 2008 ny nampakarana ny saran-dalan'ny minibus...